उम्मेदवारले लिए चुनाव चिह्न- समाचार - कान्तिपुर समाचार
उम्मेदवारले लिए चुनाव चिह्न
कार्तिक २५, २०७६ कान्तिपुर संवाददाता
पोखरा — मंसिर १४ मा हुने उपनिर्वाचनका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले सोमबार चुनाव चिह्न प्रदान गरेको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई किताब, शंख, गुलाफको फूल, क्यामेरा, कलम, आँप, डोजर, माहुरी, टेबल र क्रिकेट ब्याट चिह्न प्रदान गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा रिक्त प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि २१ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् ।
चुनावी प्रतिस्पर्धामा ११ दल र १० स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेको सहायक निर्वाचन अधिकृत रामचन्द्र उपाध्यायले बताए ।
चुनाव चिह्न पाएसँगै उम्मेदवारले चुनावी प्रचारलाई तीव्रता दिएका छन् ।
प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७६ २१:१६
अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्न मेडिकल कलेजलाई सरकारको पुनः अल्टिमेटम
कार्तिक २५, २०७६ सुदीप कैनी
काठमाडौँ — विद्यार्थीसँग उठाएको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्न सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई पुनः १५ दिनको म्याद दिएको छ ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तोकिएको समयभित्र रकम नफर्काए कलेज सञ्चालकलाई कारबाही गरिने बताए ।
यसअघि पनि मन्त्रालयले कलेजहरूलाई पटकपटक ताकेता गरिसकेको छ । शुल्क फिर्ता वा समायोजनको निर्णय कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पत्राचार गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । ‘अब पनि शुल्क फिर्ता नगरे विद्यार्थी–अभिभावकले जिल्ला प्रशासनमा उजुरी गर्नेछन्, उजुरीउपर प्रशासनले कारबाही अघि बढाउनेछ,’ उनले भने ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ असोजमा बढी शुल्क लिने कलेजविरुद्ध सम्बन्धित प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न र ठगी मुद्दा चलाउन निर्देशन दिएको थियो ।
झन्डै डेढ महिनाअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र शिक्षामन्त्री पोखरेलको उपस्थितिमा बसेको बैठकले पनि कलेजहरूलाई एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्न निर्देशन दिएको थियो । कलेज सञ्चालकले भने निर्देशन अवज्ञा गर्दै उल्टै आगामी शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना रोक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
केसीलाई अनशन तोड्न आग्रह
शिक्षामन्त्री पोखरेलले डा. गोविन्द केसीलाई अनशन तोड्न आग्रह गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेर आयोग गठनले पूर्णता पाउने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । डा. केसी ८ दिनदेखि डडेलधुरामा १७ औं अनशनमा छन् । पोखरेलले देश कालापानी र लिपुलेकका विषयमा एकजुट भएका बेला अनशन बस्न उपयुक्त नहुने धारणा राखे । केसीले अनशन बस्नुभन्दा ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
छात्रवृत्तिका लागि २८ सय ९९ आवेदन
छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनका लागि २ हजार ८ सय ९९ विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन् । आयोगले सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन मन्त्रालयमार्फत आवेदन आह्वान गरेको थियो । ऐनले सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा ७५, निजीमा १० र विदेशी लगानीका कलेजमा २० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको महाराजगन्ज शिक्षण अस्पताल, बीपी र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मात्र ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन शिक्षा मन्त्रालयले आवेदन मागेको हो ।
डा. केसी नेपाली सेनाको मेडिकल कलेज र काठमाडौं विश्वविद्यालयको धुलिखेलस्थित स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजमा पनि ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कायम गरिनुपर्ने माग राखेर अनशनमा छन् । सेनाको कलेज र साइन्सेज पनि सार्वजनिक शिक्षण संस्था हुन् ।
प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७६ २०:५३